July 21, 2021 1177
के तपाईंले कहिले सोचेर हेर्नु भएको छ ? के अचेल का वेब सिरिज , फ्लिम , गाना सोसियल मिडियामा भिडियोहरू हाम्रो दिमागको साथ कसरी खेलिरहेका छन् ? आज यी मध्य कुनै एक चिजको हेर्नुहोस् , छोटो कपडामा शरीर हल्लाउने युवती सजिलै संग देखिन्छन् ।
सरिफ भ्युज पाउनको लागि पैसा कमाउनका लागि मानिसहरुले लाजको पर्दा धेरै पहिले नै हटाए ।आजको समय यी मानिस हरू यस्तो विकृति फैलाइरहेका छन् जसको असर आज नदेखिएला, तर तपाईंको आउने वाला पिढी यसको शिकार अवस्य हुनेछन् । तपाईंलाई थाहा होस् कि यसको सुरुवात भइसकेको छ ।
यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईं बुझ्नुहुनेछ कि मनोरञ्जनको नाममा चलिरहेको विकृत धन्दाले यो तरिकाले मानिसको दिमागमा कामुकता प्रदान गरिरहेको छ ।
यो घटना भारतको महाराष्ट्र पुणे को हो । पुनेको एक इलाकाबाट एक महिला आफ्नो बच्चालाई अस्पताल लैजानको लागि एक अटो मा बस्छिन् । थोरै हिँडे पछि महिला ले देखिन्छिन् अटो चालक पटक पटक अटोको ऐनामा त्यी महिलालाई घुरेर हेर्छन् ।
महिलाले यो कुराको पटक पटक नोटिस गर्छिन् ।तर सामान्य सम्झेर उक्त कुरामा ध्यान दिन्नन् । तर केही समय पछि देखिन् की एउटा हातले अटो चलिरहेका चालक को अर्को हात उसको पाइन्टमा थियो । र पटक पटक चालकले ऐना बाट महिला लाई घुरिरहेको थियो ।
महिलाको केही थाहा भइरहेको थिएन आखिर यो अटो ड्राइभर आखिर किन यसो गरिरहेको छ ! त्यस पछि महिलाले जब ध्यान दिएर हेरिन् तब उनी डराइन् । अटो ड्राइभर सिटमा बसेर महिलालाई हेर्दै गलत काम गरिरहेको थियो । एउटा अटो ड्राइभरको यस्तो गरेको देखेर उनी छक्क परिन् तर आफूलाई सम्हालिन् ।
र अटो ड्राइभरलाई भनिन् अटो यही रोकिदेऊ । जब अटो ड्राइभरलाई अटो रोक्यो उनी कुदेर प्रहरी बुथ पुगिन् , र सबै कुरा बताइन् । यो कुरा सुने पछि तत्कालै अटो वालालाई प`क्राउ गरियो ।
भिडियो हेर्ने यहाँ थिच्नु`होस्
Prevह्वात्तै घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कतिमा कारोबार हुँदैछ ? हेर्नु`होस्
Nextरोएका पूजा र आकाश रमा`ईलो गर्दै मिलेर आए, अर्जुन र दुर्गाले दिए विवाहको सल्लाह (भिडियो सहित)
कालिञ्चोक भगवतीको दर्शन गर्दै भोलिको राशिफल हेर्नुहोस्
भएजति धन-सम्पत्ति बेचे, जागिर छोडे, स्कुल बसलाई घर बनाएर त्यहीँ बस्न थाले
आज जेठ १५ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस्….
पैसाबाट कोरोना सर्ने सम्भावना बढी , यस्तो छ कारण